“WAAN QIIROONAYAA..!! – Allison Oo Ka Falceliyay Goolkii Guusha U Horseeday Reds Caawa – Garsoore Sports
“WAAN QIIROONAYAA..!! –…
“WAAN QIIROONAYAA..!! – Allison Oo Ka Falceliyay Goolkii Guusha U Horseeday Reds Caawa
Goolhayaha u dhashay dalka Brazil ee u safta kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa dhaliyay gool taariikhi ah daqiiqadii 95aad ee kulan cayaareed kamid ah kulamada 36aad ee horyaalka Premier League-ga.
Allison ayaa u Hibbeeyay goolkiisii ​​cajiibka ahaa ee guushii Liverpool oo ay 2-1 kaga adkaadeen kooxda West Brom Axaddii aabihiis iyo qoyskiisa.
Kooxaha Reds iyo Baggies ay leeyihiin barbarro 1-1 ah kadsib goolal ay kala dhaliyeen Robson-Kanu iyo Mohamed Salah, goolhayahan ayaa ku sigtay inuu dhaawac soo gaaro waqtigii dhimashada ee cayaarta kahor koornadii uusoo qaaday Alexander Arnold kooxdan ee uu shabaqa la helay goolhaye Allison.
Goolkaas ayaa ka dhigan in Allison uu kamid noqday 6da goolhaye.ee taariikhda Premier Leaguega gool ka dhalisa balse wuxuu dhigay rikoor isaga u gaar ah wuxuuna noqday goolhayaha keliya ee madax ku dhaliyay gool taariikhda Premier League-ga.
Kooxda macalin Jurgen Klopp ay aad u dooneysay guul soo daahay si ay u ilaaliso hamigooda Champions League.
Allison ayaa goolkiisii caawa u hibeeyay aabihiisii geeriyooday bishii Febraayo ee sannadkan waxaana uu u waramay warbaahinta cayaarta kaddib
Muxuu Allison Goolka Ka Yiri?
Wuxuu u sheegay Sky Sports: “Aad ayaan u qiirooday – bishan la soo dhaafay – wax walba oo aniga iyo qoyskeyga ku dhacay – laakiin kubbada-cagta waa nolosheyda. Waxaan ciyaaray tan iyo markii aan xasuusto bini’aadam ahaan aabahay. Waxaan rajeynayaa inuu halkaan u yimid waan jeclaan lahaa inuu halkaan joogi lahaa waan hubaa inuu dabaal dagi lahaa. “
“Tani waxay u aheyd qoyskeyga iyo wiilasha. Wax badan ayaan wada dagaalameynaa waxaana dooneynaa inaan gaarno Champions League.”